Torolàlana momba ny profil LinkedIn: Ny torolàlana farany ho an'ny Mastering LinkedIn
Talata, Febroary 9, 2021 Talata, Janoary 11, 2022 Douglas Karr
Misy korontana iray taonina izao eo amin'ny sehatry ny orinasa. Izaho manokana dia nahita orinasa kely marobe namoaka loharanom-barotra nandritra ny areti-mandringana sy ny fanidiana mifandraika amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, eo am-pijerena ireo orinasam-pandraharahana miady mafy hahita talenta sy fahaizana efa za-draharaha aho.
Izaho manokana dia nanoro hevitra olona maro tao amin'ny indostrianiko mba hamindra ny fifantohan'ireo mombamomba azy ireo LinkedIn sy ny zavatra niainany tamin'ny orinasa lehibe kokoa. Amin'ny korontana ara-toekarena rehetra, ireo orinasa manana paosy lalina dia mahita ny fahafaha-mampiasa vola, manakarama ary miomana amin'ny dingana fitomboany manaraka. Tsy manana loharanom-pahalalana tsotra izao ireo orinasa madinidinika hanaovana izany.
Efa namoaka torolàlana infographic roa izahay LinkedIn Profiles, anisan'izany ny Torohevitra momba ny mombamomba ny Linkedin ary fanatsarana a Profile momba ny varotra sosialy ny LinkedIn, fa ity Sheet Ultimate Cheat amin'ny asa fialamboly dia loharanom-pahalalana feno sy mahafinaritra mba hiantohana ny hampitomboanao tanteraka ny LinkedIn amin'ny tambajotra sy karoka asa.
Fantatrao ve fa ny mombamomba an'i Linkedin novaina tanteraka dia in-40 azo inoana kokoa fa hahazo fotoana iasana?
Ny Torolàlana farany ho an'ny profil LinkedIn dia misy dingana 7
Lamin-tsarimihetsika lavorary - Makà mpaka sary matihanina anao haka sary ny toetra amam-panahin'izany sary izany, ary fenoy ireo saha rehetra alehan'ny LinkedIn anao! Ny sary LinkedIn dia mametraka fahatsapana voalohany manakiana.
Sarin'ny sary - Ny haben'ny sary optimum dia toa tsara amin'ny fitaovana rehetra, alao antoka fa hanaraka ny pitsopitsony omen'ny LinkedIn sy izay voatanisa etsy ambany amin'ny sary.
Fanatrarana toro-hevitra - Rehefa misy olona milaza aminao fa tena nahafinaritra ny nataonao dia mangataha torohevitra amin'ny alalàn'ny LinkedIn! Izy ireo dia hampifandraisina amin'ny asa tsirairay nofenoinao.
Fomba fiasa LinkedIn miafina - Midira vondrona, Raiso an-tsoratra ao amin'ny LinkedIn ary ataovy izay hampisehoana ny fampisehoana Slalomare anao any!
Mahazoa ao amin'ny LinkedIn - Ataovy namboarina ny URL-nao, ampiasao ny lohateny voatsinjara ho an'ny lohateny asa ary ampifandraiso amin'ny tranokalanao sy ny fanananao ara-tsosialy.
Torohevitra isan'andro ao amin'ny LinkedIn - manome lanja, mizara torohevitra, mampifandray ny tamba-jotra amin'ny fitarihana, ary ny maha mpitantana tsara ny tambajotra anao dia hanampy anao ho tonga tompona LinkedIn.
Ataovy azo antoka ny mombamomba anao - Mihabetsaka ny olona lasa lasibatry ny tetikasan'ny phishing ary lasibatra amin'ny fanapahana herisetra mahery vaika. Alefaso ny fanamarinana singa 2 mba tsy hahafahan'ny olona mandroba ny kaontinao.
Raha mitady toerana vaovao ianao ary te hampitombo ny vintana dia mety te hampiasa vola ihany koa ianao LinkedIn Premium. Manome anao fahitana misimisy kokoa ao anatin'ny karoka anatiny ianao ary ahafahanao manao asa bebe kokoa amin'ny manaraka:
Hafatra InMail - mifandray mora foana amin'ireo mpitantana fandraisana mpiasa.
Iza no nahita ny mombamomba anao - jereo hoe iza no nijery ny piraofilinao tao anatin'ny 90 andro lasa.
Fianarana fianarana LinkedIn - fidirana amin'ny taranja fianarana mianatra LinkedIn tarihin'ireo manam-pahaizana manokana 15,000 hanatsara ny fahaizanao na hianaranao zava-baovao.
Fiomanana amin'ny dinidinika - atsangano ny fahatokisanao ary asongadino ny fandraisana mpiasa mpitantana misy fanontaniana ambony amin'ny tafatafa, valiny resadresaka eken'ny manam-pahaizana, sns.
Sary avy amin'i Leisure Jobs, tranon'ny fandraisam-bahiny, asa fanatanjahan-tena ary fivarotana any UK.
Tags: asa fialambolyLinkedInatiny linkinprofil linkintorolàlana momba ny profillinkin fanatsarana profiltoro-hevitra momba ny profilmanatsara ny linkin
Mar 23, 2016 amin'ny 1: 57 AM
Izay no LAVA INDRINDRA… Ny infografika feno hatrizay no tiako holazaina! 😉
Mar 23, 2016 amin'ny 9: 23 AM
Haiko tsara? Nataoko tsianjery anefa aho. 🙂
Apr 1, 2016 amin'ny 1: 38 AM
Douglas, lahatsoratra mahafinaritra!
Fomba fijery tsara momba ireo mpampiasa LinkedIn izay mitady fandrosoana amin'ny asa.
Apr 1, 2016 ao amin'ny 8: PM PM
Apr 30, 2016 amin'ny 2: 45 AM
Misaotra fa tena manampy tokoa ny blôginao.